Izifundo ze-5 ze-Intanethi zeCadastre - ezithakazelisayo kakhulu - ii-Geofumadas
I-5 iikhosi ze-Intanethi zeCadastre - ezithandekayo kakhulu
Ngo-Okthobha, 2015 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
Kuyaneliseka kakhulu ukuba simemezela ukuba i-Lincoln Institute of Land Policy yenza imisebenzi ehlukeneyo yemfundo eLatin America, kubandakanywa nezifundo eziqhelekileyo zokuhamba.
Ngalesi sihlandlo uvakalisa ukunyuswa okutsha kwezifundo eziza kunikwa 2 ukuya kuNovemba 18 kwi-2015.
Iinqhagamshelo ezidweliswe apha ngezantsi zikhokelela kwiisayithi zesicelo. Apho uya kufumana iinkqubo zezifundo apho iinjongo, indlela yokusebenza, umxholo kunye nokulandelana kwemisebenzi, ootitshala, kunye nemigqaliselo yesicelo kunye nokuthatha inxaxheba kuchazwe. Umhla wokugqibela wesicelo uza kuvalwa i-21 Oktobha i-2015.
Ukuhlaziywa kweCadastral: Khetha kunye namava
Ifuna ukuxubusha ezinye iindlela ezilula (ezobuchwepheshe kunye nezemali kunokwenzeka nayiphi na umasipala) ukuphucula umgangatho weenkcukacha ezikhoyo kwi-cadastre, ngokoqobo.
Ulungelelwaniso lokuqokelela kwerhafu yepropati: Ubungakanani bentlawulo yerhafu kunye ne-aliquot design?
Le khosi yenzelwe ukukhuthaza uhlalutyo lwezinye iindlela ezisetyenziswe liziko elijongene nokulawulwa kweerhafu, ngokukhangela okhethekileyo ukusebenza ngokugqithiseleyo nokusebenza kakuhle.
Imigaqo-nkqubo yomhlaba kunye nezindlu: Ulwalamano kunye nezixhobo
Ikhosi iphakamisa ingxoxo yengxaki yezindlu kumgangatho wayo omibini: umhlaba kunye nezindlu, ngokuhlalutya iziphumo eziveliswe ngeendlela ezahlukeneyo zokuxhaswa kwezindlu kwiimarike zomhlaba.
Ukulungiswa kwezixhobo zokucwangcisa umhlaba kwiidolophana ezincinci
Injongo yale khosi kukubonisa kunye nokusebenza kwiinkcukacha ezichaza izixeko ezincinci kunye neenkqubo zolawulo lweedolophini, ukwenzela ukuba zichonge izixhobo ezifanelekileyo kunenkcazo yemigaqo-nkqubo yomhlaba.
Ukuhlaziywa kwixabiso lokuhlaziywa kwezindlu zasemadolophini: amacebo kunye nezenzo zokuphunyezwa ngempumelelo
Xoxa ngeendlela ezintsha nezenzo, uhlalutye amava aphumelele ekuhlaziyeni kwexabiso kwiLatin America.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukutshintshiselwa kwee-3 zeziganeko zeCadastre, ukubhaliswa kunye nokuHlalwa kweMhlaba - UkuPasa kokuQala
Post Next BIM - mkhuba lakho CADOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 kwi "I-5 Courses Courses for Cadastre - inomdla kakhulu"
UJulio Lopez uthi:
Ndingathanda uqeqesho lokuqala
Ndiyabulela umnikelo, ndandifuna ulwazi ngale nto.
Paula andrea wagxininisa u-gomez uthi:
Mva ntambama, njengoko ndibhalisa ...
RUBEN CASTRO LOBO uthi:
Ndisebenza kwiindawo ezinxulumene nezifundo,
Ndingathatha inxaxheba njani, ukuze ndibhalise?